साना व्यवसायिको प्रतिनिधित्वका लागि मेरो उम्मेदवारी - Sadarline
अाजदेखि विश्व फुटबलको महाकुम्भ सुरु हुँदै
महासंघको अधिवेशन र नेतृत्व चयन
साना व्यवसायिको प्रतिनिधित्वका लागि मेरो उम्मेदवारी
बिचार ९ मंसिर २०७७, मंगलवार १५:५३
नेपाली उद्योगी व्यावसायीहरुको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अधिवेशन आगामी मंसिर ११–१३ सम्म काठमाण्डौमा सम्पन्न हुन गईरहेको छ । आगामी ३ वर्षे कार्यकालको नेतृत्वको लागि उद्योगी व्यवसायीका नेताहरु यतिबेला जनमत आफ्नो पक्षमा पार्नको लागि प्रचार अभियानमा तीब्रताका साथ लागेका छन् । यसैक्रममा कोहलपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष चक्रबहादुर अधिकारी पनि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्यमा आफ्नो उम्मेद्वारी दिएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको निर्वाचन प्रचार–प्रसारकै क्रममा उनी गत कात्तिक १७ गते सवारी दुर्घटनामा परी गम्भीर घाइते भए । उद्योग वाणिज्य महासंघको चुनावी प्रचारका क्रममा पाल्पाको बगनाशकाली गाउँपालिका–३, बेलाउतीडाँडामा अधिकारी सवार गाडी दुर्घटनामा परेको थियो । अहिले अधिकारीको स्वास्थ्य अवस्थामा केहि सुधारआएसँगै चुनावी अभियानलाई तिव्रता दिएका छन् । यसै सन्दर्भमा रहेर हामीले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य पदका उम्मेद्वार अधिकारीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :
तपाईको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो रहेको छ ।
– उद्योग वाणिज्य महासंघको चुनावी प्रचारका क्रममा पाल्पाको बगनाशकाली गाउँपालिका–३, बेलाउतीडाँडामा दुर्घटना परी म र रोल्पा उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष किशोर आचार्य दुवै जना घाइते भएको थियौैं । काठमाण्डौंमा गरिएको उपचारमा मलाई अहिले केहि सुधार भएको छ । मैले अहिले स्वाथ्य लाभसंगै चुनावी अभियानलाई पनि अघि बढाएको छु ।
चुनावी प्रचार–प्रसार अभियानलाई कसरी व्यवस्थित गरिरहनु भएको छ ?
– व्यवसायीको हकहीतको लागि नेतृत्वमा पुग्ने अपेक्षाका साथ चुनावी अभियानलाई विशेष ध्यान दिएर देशको विभिन्न स्थानमा पुगेर आफ्नो प्रचार अभियानमै जुटेको बेलामा सडक दुर्घटना परेपछि अभियानमा केहि असर परे पनि हाल मलाई जिताउनका लागि कोहलपुर उद्योग वाणिज्य संघको कार्तिक २७ गते बसेको कार्य समितिको बैठकले समितिका का.बा. अध्यक्ष नमप्रसाद शर्मा र संघका महासचिव तेजप्रसाद अधिकारीको टोलीलाई मंसिर २ गते देखि प्रदेश १,२ र ३ मा हुने टिमको प्रचार र सभामा सहभागिता गराउने निर्णय गरेसँगै अहिले चुनावी अभियान तिव्र पारी रहेको छ । देशैभरीका साथीहरुसँग सम्पर्कमा रहेको छु । चुनावी अभियानलाई तिव्रता पारिएको छ । मलाई जिताउन सिंगो मेरो टिम पनि परिचालन भएको छ ।
– पश्चिम नेपालको व्यवासायिक केन्द्रको रुपमा विकाशित शहर कोहलपुरबाट साना उद्योगी तथा व्यवसायिको आवाज लिएर नेपाल उद्योग वाणिज्य संघको केन्द्रिय सदस्य पदको उम्मेदवार बनेको हुँ । म साना व्यापारीहरुको पक्षमा छु । साना व्यापारीहरुको विकास र समृद्धिका लागि मेरो उम्मेद्वारी हो । देशभरी रहेका व्यापारीहरुमा देखिएका विभिन्न समस्या सामाधान गर्नका लागि साथै उद्योगि व्यापारीहरुले राज्यले लिएको नीतिलाई व्यवसायस् मैत्री बनाउनका लागि मेरो उम्मेद्वारी हो ।
कोरोना संक्रमणको कारण आव्हान गरेको लकडाउनले व्यापार व्यवसायमा पारेको असरलाई तपाईले कुन रुपमा लिनुभएको छ ?
– विश्वभरी फैलिएको कोरोना भाईरस महामारीका कारण सबै भन्दा बढि समस्यामा उद्योगि व्यापारीहरु रहेका छन् । कतिपय व्यापारीहरु कोरोना भाईरसका कारण पलायन भएका छन् । तीनहरुको पुर्नस्थापनाका लागि राज्यले विशेष नीति लिनु आवश्यक रहेको छ । कोरोना भाईरसले व्यवसायमा नकरात्मक असर पारेको छ । वर्तमान अवस्थामा यस्ता समस्यालाई सबैले गम्भिर रुपमा आत्मासाथ गर्न आवश्यक रहेको छ भने व्यवसायमा परेको असरलाई हामी सबैले गम्भिर भएर सोच्न आवश्यक छ । साथै मैले पनि यस विषयमा गम्भिर छु ।
कोहलपुर क्षेत्रले पहिलो पटक नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको केन्द्रिय सदस्यको उम्मेदवार पठाएको छ । यसलाई कसरी लिुन भएको छ ?
– पश्चिम नेपालको व्यवासायिक केन्द्रको रुपमा विकशित हुँदै गरेको कोहलपुर क्षेत्रबाट पहिलो पटक केन्द्रिय सदस्य पदमा मैले उम्मेदवारी दिएको छु । यो हाम्रो पहिचान पनि हो । सबैको सहयोग भए कोहलपुर क्षेत्रले पनि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा प्रतिनिधित्व गर्न पाउने छ भन्ने आशा गरेको छु ।
अन्त्यमा केहि भन्नु छ ।
– कोरोना संक्रमणको यस्तो विषम परिस्थितिमा व्यवसायिक हक हितका विषयमा वकालत गर्दै गर्दा सडक दुर्घटनामा परेर घाइते हुन पुगेको अवस्थामा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको केन्द्रीय सदस्य पदमा उम्मेदवारी दिएको छु । खास गरी साना उद्योगी तथा व्यवसायिको हकहीतको लागि मेरो प्रतिनिधित्व रहने गरी सबैले अत्याधिक मत दिई बहुमतका साथ बिजय गराउनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु । मलाई मतदान गरी बिजय गराउ अनुरोध गर्दै संधै व्यापारीहरुकै पक्षमा मेरो जीवनलाई समर्पित गरेको छु र गर्ने छु ।
भेरीको परीक्षणमा बाँकेका सात संक्रमित थपिए
नेपालगञ्ज : भेरी अस्पताल नेपालगञ्जले गरेको पिसिआर परीक्षणमा बाँकेका ७ सहित ११ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा ५० जनाको परीक्षण गर्दा ११ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो । जसमध्ये बर्दिया र दाङका दुईदुई जनामा कोरोना देखिएको भेरी अस्पतालले मंगलवार जारी गरेको विवरणमा उल्लेख छ । […]
१५ जेष्ठ २०७५, मंगलवार १७:४२
१ माघ २०७३, शनिबार १३:०५
तेस्रो बंगलादेश प्रर्दशनी मेला–२०१७ को तयारी पूरा
१२ मंसिर २०७४, मंगलवार २१:४६